« Antsoin’i Kristy hankeo amin’ny fanasany is - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady Tsotra Faha 28A
Iz. 25, 6-10a; Fil. 4, 12-14.19-20; Mt. 22, 1-14
Ankoatra ireo fanirahana ho any an-tanimboaloboka, dia ny fanasana ho amin’ny fampakaram-bady indray no fanoharana raisin’i Jesoa hilazany ny Fanjakan’ny lanitra: « Ny Fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny andriamanjaka anankiray izay nanao fanasana tamin’ny fampakaram-badin’ny zanany lahy… ». Fampakaram-bady, raharahan’ny ankizy, mariazy…, fomba sy fiteny amin’ny fiainan’ny olona andavanandro izany ka ampiasain’i Jesoa mba ahatakarana ny misterin’ny Fanjakan’ny lanitra, ary amin’ny alalan’ny tantara kely hatrany no ampitan’i Jesoa azy.
Mahafinaritra nefa toa ratsy fiafara ny tantara. Mpanjaka iray, manan-karena, manana « ankizy irakiraka » sy « miaramila » marobe, nanao fanasana tamin’ny mariazin-janany lahy, ary naniraka ny ankiziny hiantso ireo izay nahazo fanasana. Tsy araka ny nampoizina anefa ny valintenin’ireo nasaina: « Tsy nety nankany ireo ». Tsy nahakivy ny mpanjaka izany fa nitady fomba hafa indray izy hiantsoana ireo nasaina: novàna ny iraka mpitondra hafatra, « Dia naniraka ankizy hafa indray izy… »; natao mazava kokoa ny teny fanasana, « efa voavoatra ny nahandro ary efa vonona avokoa ny zavatra rehetra ». Mbola fandavana ihany no setriny: « Tsy nahoan’izy ireo akory izany ». Tsy ny fanasana no tsy nazava na ny mpanasa no tsy azoazon’ny olona na ireo iraka no tsy nahatonga hafatra fa ireo nasaina mihitsy no malailay fonosana: « samy lasa nandeha izy, ny sasany amin’ny sahany, ny iray nakany amin’ny varony, ary ny sasany nisambotra ny ankiziny, ka nony efa notevatevainy dia novonoiny ». Ratsy fiafara ny fanasana satria naringan’ny mpanjaka ireo nasaina satria sady tsy mendrika no ratsy fanahy ary mpamono olona.
Tsy nionona tamin’izany ilay mpanjaka fa mbola naniraka ny ankiziny indray hanangona izay rehetra hitany « eran’ny arabe » na « tsara na ratsy ». Feno hipoka mpihinana ny trano fampakarana. Niditra ny mpanjaka hizaha ireo nasaina. Fomba fanomezana haja azy ireo izany. Mbola tsy araka ny nampoizina indray anefa… Indro lehilahy anankiray tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady. Nafatotra izy ary nariana any amin’ny maizina… Ratsy fiafara ny tantara.
Mifandray avy hatrany amin’ny tenin’i Izaia mpaminany, ao amin’ny vakiteny voalaohany, ity fanoharana momba ny fampakaram-bady ity: « Amin’izany andro izany, ny Tompon’ny tafika hanomana fanasana ami’ity tendrombohitra ity… » Andriamanitra Ray be fitiavana no Ilay manasa, ny olombelona ho ao amin’ny fanasany. Jesoa Kristy no ilay zanany lahy mampakatra. Samy asaina daholo fa tsy misy fanavahana intsony.
Tsy mitsahatra manasa ny olombelona ho ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra Andriamanitra Ray. Sakafo be, hafaliana sy firavoravoana, amin’ny divay ela niotrehana, hena matavy sy be tsoka…, no ao amin’ny fanasan’ny Tompo. Mbola maro anefa no mandà ny fanasana satria mbola revo amin’ny fitadiavana; mbola sempotra amin’ny varotra; lany andro amin’ny ady sy fifandirana ary ny fifamonoana… Ireo izay voaasa indray, ao ny manararaotra sy nanao tsinontsinona ny mpanasa ka tsy mba nisahirana akory « niakanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady ». Tsy niova fitafy, tsy niova fomba fiaina sy fisaina. Tsy nitafy ny fitafiam-pamonjena, ny akanjom-pahamarinana (Iz. 61, 10). I Kristy no fitafiam-pamonjena sy akanjom-pahamarinana. Mitafy ny olom-baovao « amin’ny fahamarinana amam-pahamasinana tena izy tokoa », hoy Md Paoly (Ef.4, 24).
« Maro no nantsoina, nefa vitsy no fidina » fa « sambatra izay voantson’ny Zanak’ondry amin’ny fanasany » ka hamaly hoe « Tompo ô, tsy mendrika hidiranao ato amiko aho fa manonona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko ».
Teny Mahavelona : « Fitiavana sy Fahamarinana no tena endrik’i Kristy » - il y a 2 mois
Teny Mahavelona : « Ny tena apostoly : matoky, mifankatia, tsy matahotra »﻿ - il y a 3 mois